﻿Download Windows Internet Explorer 9 maka Windows Vista na Windows Server 2008 from Official Microsoft Download Center
AfrikaansAmpharicArabicAssameseAzeri (Latin)BaskiBekeeBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanChainis (di mfe)Chainis (otu okwesiri)Chinese (Hong Kong SAR)CzechDanishDutchFilipinoFinnishFrenchGalicianGreekGujaratiHausaHebrewHindiIgboInuktitut (Latin)isiXhosaisiZuluJaman KannadaKazakhKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzMalay (Brunei Darussalam)Malay (Malaysia)MalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye Bosnia (Cyrillic)Onye Bosnia (Latin)Onye BulgariaOnye CroatiaOnye EstoniaOnye GeorgiaOnye HungaryOnye IcelandOnye Indonesia Onye ItalyOnye Japan Onye KoreaOnye LatviaOnye LithuaniaOnye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Bokmål)Onye Norway (Nynorsk)Onye Portuguese (Portugal)Onye RomaniaOnye RussiaOnye Serbia (Cyrillic)Onye Serbia (Latin)Onye SloveniaOnye SpainOnye SwedenOnye UkraineOriyaPersianPolishPortuguese (Brazil)PunjabiQuechua (Peru)Sesotho sa LeboaSetswana (South Africa)SinhalaSlovakTamilTatarTeluguThaiTurkishUrduUzbek (Latin)VietnameseWelshYoruba
Ederede Dabere na Amamịghe (KB): KB982861
Windows Internet Explorer 9 na-enye saịtị weebụ na ngwa yiri ma na-arụ ọrụ dị ka ngwa PC ọdịnala site na ike nke Windows.
Ọsọ: Internet Explorer 9 dị ọsọ ebe niile. Ezubere iji nweta uru nke ngwaike PC gị niile site na Windows, Internet Explorer 9 na-enye ahụmịhe nwere eserese bara ụba ma juo eju ndị dị oke ọsọ ma na-aza azịza dị ka ngwa ọdịnala awụnyere na PC gị.
Ọcha: Internet Explorer na-agbado anya na saịtị Weebụ ndị ịhụrụ n’anya site n’iji nlele dị ọcha ma nwee mpaghara ebe nlele ewelili nke na-eme ka saịtị Weebụ gị mukee. Mmekọrịta na Windows 7 nwere nghọta na oyiri na-enye nweta otu-ọpịpị na ngwa Weebụ ndị amadoro na Ogwe ọrụ gị.
Atụkwasịrị obi: Internet Explorer bụ ụzọ atụkwasịrị obi iji gaa na Weebụ n’ihi ọ nwere mkpokọta buru ibu nke nche, nzuzo na teknụzụ atụkwasịrị obi na-echekwa gị karịa ma kwụsị nkwụchibido na ahụmịhe nchọgharị gị.
Nrụkọta ọrụ: Nkwado maka HTML5 na ọkọlọtọ Weebụ oge ugbu a arụrụ iji nweta uru nke GPU pụtara, n’otu nke ahụ anaghị emetụta naanị na Weebụ ahụ, mana ọ na-aga ọsọ ọsọ karịa ma na-enye ahụmịhe bara ụba karịa site na Windows na Internet Explorer 9.
Kọmputa/Igwe nrụọrụ: Kọmputa nwere igwe nrụọrụ 233MHz ma ọ bụ karịa (Akwadoro igwe nrụọrụ Pentium)
Oghere Diski Ike:
Windows Vista yana Service Pack 2: 120MB
Windows Server 2008 R2 yana Service Pack 2: 200MB
Ngosipụta: Super VGA (800 x 600) ma ọ bụ ihuenyo nwere nha dị elu karịa nwere agba 256.
Ihe mpụga: Mọdem ma ọ bụ njikọ Ịntanetị; Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse, ma ọ bụ ngwaọrụ ntụpọ dakọtara ọnụ.
Mee otu n’ime ihe ndị a:
Ịmalite nwụnye ahụ ozugbo, pịa Mepee ma ọ bụ Si na ọnọdụ ya dị ugbu a tinye programmụ a n’ọrụ.
Iji detuo nbudata ahụ na kọmputa gị maka nwụnye ma emechaa, pịa Chekwaa ma ọ bụ Chekwaa programmụ a na diski.
Nbudata a bụ maka naanị Microsoft Windows Vista SP2 na Windows Server 2008 SP2. Iji budata Internet Explorer 9 maka ụdị nke Microsoft Windows ndị ọzọ akwadoro:
Windows Internet Explorer 9 maka usoro Windows Vista SP2 64-bit na usoro Windows Server 2008 SP2 64-bit.
Windows Internet Explorer 9 maka Windows 7 na Windows 7 SP1 .
Windows Internet Explorer 9 maka usoro Windows 7 64-bit, usoro Windows 7 SP1 64-bit, usoro Windows Server 2008 R2 64-bit na usoro Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit.
Ndetu Mbupute Internet Explorer 9
Blọọgụ Otu Internet Explorer